भबिष्यमा व्यवसायी बन्छु भनेर सोच चाँही त्यती बेला नै बनाएको थिए : रोशन बानियाँ – Subha Khabar | शुभ खबर, Subha Khabar, Nepal News, Nepal, Nepali News, Online News, Hot News
भबिष्यमा व्यवसायी बन्छु भनेर सोच चाँही त्यती बेला नै बनाएको थिए : रोशन बानियाँ
बिगत लामो समय देखि नेपालमा रही बिभिन्न व्यवसायमा संलग्न रहि नेपालमा नै केही गरी देखाउनु पर्छ भनी एक सकारात्मक सोच राखी सफल व्यवसायीको रुपमा आफुलाई स्थापित गर्न सफल रोशन बानियाँ एक आम नेपाली युवाहरुलाई प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ । उहाँसगै गरिएको एक अन्र्तरमनको कुराकारानी ।
कतिबर्ष देखि व्यवसायी भएर कार्य गर्दै आईरहनु भएको छ ?
यो ५ औ बर्ष हो ४ पुरा भएर ५ बर्षमा प्रबेश भयो ।
हाल कुन कुन व्यवसाय संचालन गर्दै आईरहनु भएको छ ?
हाल नेपालमा एक कन्सल्टेन्सी संचालन गरी नेपालबाट जापानमा अध्ययन गर्न जाने ईच्छुक नेपाली बिद्यार्थीहरुलाई परामर्श दिदै र उनीहरुलाई जापान अध्ययन गर्नको लािग सहयोगी भुमिका निर्वाह गरी मायुमी एजुकेशन कन्सल्टेन्सी प्रा. लि लाई अगाडी लगिरहेको छु । साथै नेपालमा नै सुपर मार्केट, स्पोर्टस सेन्टर र गेष्ट हाउसमा लगानी गर्दै आईरहेको छु । जापानमा साझेदारीमा रेष्टुरेन्ट, क्लिनिङ्ग कम्पनी, कन्सट्रक्सन कम्पनी, रियल स्ट्रेट कम्पनीहरु संचानलन गरिरहेको छु । नेपालबाट जापान अध्ययन गर्न आउने नेपाली बिद्यार्थीहरुलाई बस्नको लागि होस्टलको पनि व्यवस्था मिलाईरहेको छु । राम्रो योजना हुने भयो भने पैसा नै ठुलो कुरो होईन रहेछ योजना सुरु हुदै जादाँ पैसा व्यवस्थापन आफै हुदै जाँदो रहेछ । हामी सँग धेरै जापानिजहरुले काम गर्न ईच्छा देखाई रहेका छन् यदि कुरा मिल्यो भने काम पनि सुरु गर्नेछु । आजकाल भेटघाटमा व्यस्त छु र लगानीको बाताबरणको लागि आबश्यकीय तयारी गरिरहेको छु । जापानको हिरोसीमा रहेको एक बिद्यालय सँग मिलि टोकियोमा एक जापानीज भाषाको अध्ययन स्कुल संचालन गर्ने प्रकृया अघि बढीसकेको छ र २०१७ को अब्टोबर महिनाबाट संचालन गर्ने तयारीमा छु ।
हाल संलग्न व्यवसायमा लाग्न कसले प्रेरित गर्याे जसले गर्दा आज यो ठाँउमा हुनुहुन्छ ?
सुरुमा त जापानीज भाषा अध्ययन गरी कम्प्युटर इन्जिनियरको रुपमा काम गरे तर त्यती बेला मैले जापानीज भाषा कमी भएको महशुस गरिरहेको थिए र कम्पनीको लागि पनि त्यती उपयोगी नभएको महशुस भईरहेको थियो । त्यती नै बेला जागिर पनि छोडे र भबिष्यमा व्यवसायी बन्छु भनेर सोच चाँही त्यती बेला नै बनाएको थिए । त्यसपछि व्यापार बिषय अध्ययन गरी नेपाल फर्कने सोच बनाए र फर्के पनि । फर्किने क्रममा मनमा जापानीज भाषाको प्रयोग गरी जिवनमा केही गर्छु भन्ने सोच बनाईरहेको थिए र तत्कालै कन्सल्टेन्सी सुरु गरे । यो क्रममा धेरै जापानीज साथीहरुलाई नेपाल बोलाए नेपाल देखाए र आफु पनि जापान जाने आउने क्रम चलि नै रहेको थियो । अब यतिले भएन भनेर जापानमा व्यबसाय सुरु गर्छु भनेर एक रेष्टुरेन्टबाट सुरु गरे र सँगै मिलेर केही गरौ भन्ने जापानीजहरु पनि भोटियो आज संगै अगाडी बढिरहेको छु । हेर्याे समयले कति सम्म साथ दिन्छ र कहाँ सम्म पु¥याउँछ त्यो भने हेर्न नै बाँकी छ । व्यवसाय भनेको नि एक नशा जस्तै हो एउटा राम्रो भयो भने अर्काे सुरु गर्न मन लाग्ने हाहाहा…… व्यवसाय गर्छु भनेर हिडेको मान्छेलाई धेरै किसिमको प्रस्तावहरु आउछन् र आए पनि र आफुले पनि धेरै गरियो त्यो कति सफल भयो होला कती सुरुमा नै अन्त्य पनि भयो । व्यवसायी बन्न योजना महत्वपूर्ण कुरा हो भने अनि शिक्षा, साथै पैसा पनि एक हो । इच्छा शक्ति हुने हो र मिलेर अगाडी बढ्न सक्यो भने धेरै कुराहरु हुन्छ जस्तो लाग्छ र योजना राम्रो लागेर म आफु पनि अगाडी बढीरहेको पनि छु । म भन्दा राम्रो काम गरेर अगाडी बढीरहेको मेरा साथीहरु नै मेरो लागि प्रेरणाको स्रोत हो ।
तपाईको अनुभबमा नेपाली र जापानीज मध्ये को सँग कार्य सम्पादन गर्न सजिलो महसुश हुन्छ ?
काम कस्तो छ त्यो हेरेर हुन्छ तर कामलाई जसले जिम्मा लिएर गर्छ, जसले नियम र कानुनको अधिनमा रहि समयलाई पछ्याउदै काम गर्छ अनि आफ्नो कामलाई जसले माया गर्छ त्यस्तो व्यक्तिहरु सँग काम गर्न निकै सजिलो हुन्छ अनि रमाईलो पनि । तर जापानमा भएकोले भाषाले गर्दा पनि काम गर्न सजिलो चांही जापानीजहरु संगै नै हुन्छ की ।
तपाईले बुझ्नु भएको नेपाल
हेर्नुस । म नेपालको सबै ठाँउ पुग्न त सकेको छैन तर पनि नेपाल सानो भईकन पनि एकदमै सुन्दर र सम्भाबना भएको देशको रुपमा लिन सकिन्छ । जहाँ सगरमाथा छ, गौतम बुद्ध जन्मेको देश जसले हामीलाई संसारमा राम्रो सँग चिनाउछ पनि । तर पनि यी सबै कुरा भएर मात्रै पनि हुन्न यसको सहि व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने त्यसको के अर्थ हुन्छ होला र ? अनि अर्काे कुरा भनेको देश भनेको नेपाली जनताले नै बनाउने हो जस्तो लाग्छ मलाई । यदि लगानी गर्ने बाताबरण बनाउन सकेमा बिदेशमा रहने नेपाली दाजुभाई दिदिबहिनीहरुले पनि नेपालमा लगानी गर्न जागरुक हुने थिए । देशलाई समुन्द्रले छोएन त्यो चाँही अलि बिडम्बनाको कुरो हो र देशमा बाटो, पानि, बिजुली र सुरक्षा राम्रोसँग मात्र दिन सक्ने हो भने पनि देशले कोल्टो फेर्ने कुरामा दुईमत छैन । बिकासको निमित्त बाटो महत्वपूर्ण कुरा हो र जहाँ बाटो पुग्छ त्यहाँ बिकास अबश्य हुन्छ पनि । र अर्काे कुरा नेपालमा फोहोरको व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने नेपालले अझै छिटै मुहार फेर्न कुरामा कुनै संखा छैन । एक जना मेरो बिदेशी साथीले मलाई भनेको थियो नेपाल बिश्वमै एकदमै राम्रो गन्तव्य हो तर फोहोरको समस्या ज्यादै चुनौतीको रुपमा रहेको छ । त्यसो सुन्दा अलि नरमाईलो त लाग्यो तर यर्थात पनि यहि नै हो । एउटा कम्पनी सँग फोहोर व्यवस्थापनको कुरो भईरहेको छ र यो निकै राम्रो योजना पनि हो यो लिएर हामी चाडै नै नेपालमा आउदैछौ । यो देश देशको कुरा हो यसमा दुई देश बिचको कुरा रहेको हुदाँ यसलाई प्रस्ताब लिएर चाडै नेपाल आउने तयारीमा छौ ।
Published Date : २३ कार्तिक २०७३, मंगलवार ०६:०३